एमबीबीएससको शुल्क बढाउने निर्णय प्रति केसीको आपत्ती – Khabar Silo
३ कात्तिक, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाउने निर्णयप्रति प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आपत्ती जनाएका छन् । वैज्ञानिक अध्ययन नगरी शुल्क निर्धारण गर्न नहुने भन्दै आयोगको यो निर्णय मान्य नहुने डा. केसीले बताएका छन् ।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै केसीले यो शैक्षिक शत्रमा शुल्क बढाएर विद्यार्थीलाई मार्का पारे आफू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । त्यस्तै केसीले आफ्ना पुराना माग पूरा नगरे कात्तिक १३ गतेदेखि अनशन बस्ने समेत जनाएका छन् । उनले सरकारलाई माग पूरा गर्न कात्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
यसअघि उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको थियो ।
पोखरा – निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोक्दै गर्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र नेता वामदेव गौतमलाई कास्कीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनाउने चर्चा चल्यो । बर्दियामा कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग हारेका वामदेवले सांसद हुन धेरै प्रयास गरे । काठमाडौंका सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने अवस्थासम्म पुर्‍याए । तर पार्टीले नमानेपछि उनको […]
काठमाडौं – विगत वर्षमा भन्दा यस वर्षको तिहारमा भारतबाट ल्याइने फूलको मात्रामा कमी आउने भएको छ। पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा फूलखेती गर्नेको संख्या बढेको र यस वर्ष ठीक समयमै तिहार परेकाले आयात गरिने फूलको मात्रामा कमी आउने भएको हो। गत वर्ष भारतबाट ३० लाख बराबरको तीन लाख सयपत्री फूलको माला ल्याइएको थियो। यस वर्षको तिहारका […]